एक शल्यचिकित्सक आफ्नो विश्वासबारे बताउँछन्‌ | अन्तरवार्ता
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इन्डोनिसियन इलोको उर्दू एस्टोनियन कन्नडा किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन क्रोएसियन क्षोसा खाकस गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टिग्रिन्या डच डेनिश तामिल ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मल्यालम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
अन्तरवार्ता | गियर्मो पेरेज
डा. गियर्मो पेरेज दक्षिण अफ्रिकाको ७०० शैया भएको एउटा अस्पतालमा प्रमुख शल्यचिकित्सकको रूपमा काम गर्थे। हालसालै तिनले आफ्नो कामबाट अवकाश लिए। धेरै वर्षसम्म तिनले क्रमविकासमा विश्वास गरे। तर मानव शरीरलाई परमेश्वरले नै सृष्टि गर्नुभएको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तिनी पछि विश्वस्त भए। ब्यूँझनुहोस्! पत्रिकाले तिनको विश्वासबारे केही प्रश्न सोधेको थियो।
हुन त म क्याथोलिक परिवारमा हुर्कें। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा शङ्‌का लाग्थ्यो। ‘मानिसहरूलाई नरकको आगोमा जलाउने पनि परमेश्वर हुन्छ र?’ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। त्यसैले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले जीवित प्राणीहरूलाई ईश्वरले सृष्टि गरेको होइन, सबै प्राणी क्रमविकासको कारण अस्तित्वमा आएका हुन्‌ भन्दा मैले पत्याएँ। क्रमविकासको शिक्षा सही हो भन्ने कुराको प्रमाण छ भन्ठान्थें। मेरो चर्चले पनि क्रमविकासको शिक्षा सही हो तर परमेश्वरले नै क्रमविकासलाई सम्भव तुल्याउनुभएको हो भनेर सिकाउँथ्यो।
कुन कुराले गर्दा बाइबलमा तपाईंको चासो जाग्यो?
मेरी श्रीमती सुजानाले यहोवाका साक्षीहरूसित बाइबल अध्ययन गर्न थालिन्‌। परमेश्वरले मानिसहरूलाई नरकको आगोमा सास्ती दिनुहुन्न भनेर तिनीहरूले सुजानालाई बाइबलबाट देखाए। * परमेश्वरले हाम्रो पृथ्वीलाई सुन्दर बगैंचा बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भनेर पनि तिनीहरूले देखाए। * बल्ल चित्तबुझ्दो शिक्षा भेट्टायौं जस्तो हामीलाई लाग्यो। सन्‌ १९८९ मा निक नाम गरेका यहोवाका साक्षी मकहाँ आउन थाल्नुभयो। एकपटक हामीले मानव शरीर र यसको सुरुवातबारे छलफल गरेका थियौं। त्यतिबेला हिब्रू ३:४ मा बताइएको यो सरल तर्कले मेरो मन छोयो: “हरेक घर कसै न कसैद्वारा निर्माण गरिएको हुन्छ तर सबै थोक निर्माण गर्ने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ।”
के मानव शरीरको अध्ययनले तपाईंलाई सृष्टिको शिक्षा सही हो भनेर स्वीकार्न मदत गऱ्यो?
अँ, मदत गऱ्यो। उदाहरणको लागि, हाम्रो शरीरलाई आफै निको हुन सक्ने क्षमतासहित डिजाइन गरिएको छ। जस्तै, शरीरमा घाउ हुँदा त्यो निको हुन चार चरणको एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यस प्रक्रियामा एउटा चरण पूरा हुन नपाउँदै अर्को चरण सुरु भइहाल्छ। यस कुराले मलाई शल्यचिकित्सकले त शरीरको आफै निको हुने क्षमतासित मिलेर काम गर्ने मात्र हो भनेर सम्झायो।
घाउ हुँदा त्यसलाई निको पार्न हाम्रो शरीरले के गर्छ?
घाउ भएको केही सेकेण्डमै पहिलो चरण सुरु हुन्छ। यस चरणमा रगत बग्न नदिन विभिन्न काम हुन्छ। यी कामहरू जटिल हुन्छन्‌ अनि सबै काम ठीक-ठीक समयमा पूरा हुन्छ। हाम्रो शरीरको रक्तसञ्चार प्रणाली पनि अचम्मको छ। हाम्रो शरीरका सबै रक्तनलीलाई जोड्‌ने हो भने झन्डै १,००,००० किलोमिटर लामो हुन्छ। साथै हाम्रो शरीरको रक्तसञ्चार प्रणालीसित रक्तनलीमा परेको प्वाल टाल्ने र मर्मत गर्ने क्षमता छ। यो देखेर इन्जिनियरहरू पनि छक्क पर्छन्‌ होला।
त्यसोभए दोस्रो चरणमा चाहिं के हुन्छ?
केही घण्टापछि रगत बग्न बन्द हुन्छ र घाउ भएको ठाउँ सुन्निन थाल्छ। घाउ सुन्निने यो चरणमा पनि विभिन्न कामहरू हुन्छ। सबैभन्दा पहिला, रगत बग्न नदिन साँघुरो भएको रक्तनली फुलिन थाल्छ। यसरी फुलिएपछि घाउ भएको ठाउँमा रगत सञ्चालन हुन पाउँछ। त्यसपछि रगतमा भएको प्रोटिनयुक्त तरल पदार्थले गर्दा घाउ भएको ठाउँ सुन्निन्छ। यस तरल पदार्थले सङ्‌क्रमणसित लड्‌ने, विषालु पदार्थको असर कम गर्ने र बिग्रेका कोषहरूलाई हटाउने काम गर्छ। घाउ भएको ठाउँ सुन्निने क्रममा लाखौं अणु र कोषहरूको उत्पादन पनि हुन्छ। तिनीहरू सबैलाई आ-आफ्नो काम दिइएको हुन्छ। अणु र कोषहरूको उत्पादन हुने क्रममा अर्को चरणको लागि बाटो तयार पार्ने पनि गरिन्छ।
त्यसपछि के हुन्छ?
घाउ भएको दुई दिनभित्रै हाम्रो शरीरले घाउ निको पार्न आवश्यक तत्त्वहरू उत्पादन गर्न थाल्छ। यो नै तेस्रो चरणको सुरुवात हो। दुई हप्तामै त्यस्ता आवश्यक तत्त्वहरू उत्पादन हुने काम तीव्र गतिमा सञ्चालन हुन्छ। घाउ वरिपरि रेसा (फाइबर) उत्पादन गर्नका लागि कोषहरू शरीरका विभिन्न भागबाट घाउ भएको ठाउँतिर सर्छ र त्यहाँ ती कोषहरूको सङ्‌ख्यामा वृद्धि हुन्छ। साथै घाउ भएको ठाउँमा स-साना नयाँ रक्तनलीहरू पनि बन्छ। यी रक्तनलीहरूले अनावश्यक तत्त्वहरू हटाउने र आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध गराउने काम गर्छ। अर्को एउटा जटिल काम पनि हुन्छ, जसमा विशेष किसिमका कोषहरूको उत्पादन हुन्छ र ती कोषहरूले घाउ पुर्ने काम गर्छन्‌।
ओहो! धेरै काम हुँदो रहेछ। त्यसोभए घाउ पूरै निको हुन अझै कति समय लाग्छ?
अन्तिम चरणमा घाउ भएको ठाउँलाई पहिलेको जस्तै आकार दिने काम हुन्छ। यो काम पूरा हुन महिनौं पनि लाग्न सक्छ। भाँचिएका हड्डीहरू पुनः बलिया हुन्छन्‌ र घाउ वरिपरि भएका नरम रेसाहरूको ठाउँ अझ मजबुत तत्त्वहरूले लिन्छ। घाउ निको हुने प्रक्रिया वास्तवमै आपसी तालमेलको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो।
तपाईंले बिर्सनै नसकेको कुनै घटना छ कि?
शरीरले कसरी आफैलाई निको पार्छ भनेर देख्दा म आश्चर्यमा पर्छु
छ। एउटा डरलाग्दो कार दुर्घटनामा परेकी १६ वर्षकी केटीलाई मैले उपचार गरेको थिएँ। तिनको फियो (स्प्लीन) च्यातिएको थियो। आन्तरिक रक्तस्राव पनि भइरहेकोले तिनको अवस्था साह्रै नाजुक थियो। धेरै वर्षअघि यस्तो अवस्थामा डाक्टरहरूले फियोलाई सिलाउन वा काटेर फालिदिन अपरेसन गर्थे। तर आजकाल डाक्टरहरू शरीरको आफै निको हुन सक्ने क्षमतामा भर पर्छन्‌। मैले ती केटीको उपचार गर्दा सङ्‌क्रमण रोक्ने, तरल पदार्थ अनि रगतको कमी हुन नदिने र दुखाइ कम गर्ने उपचार मात्र गरें। केही हप्तापछि स्क्यान गरेर हेर्दा त फियो निको भइसकेको थियो! शरीरले कसरी आफैलाई निको पार्छ भनेर देख्दा म आश्चर्यमा पर्छु। अनि हामीलाई परमेश्वरले नै डिजाइन गर्नुभएको हो भन्ने कुरामा मेरो विश्वास अझ बलियो हुन्छ।
यहोवाका साक्षीहरूको कुन कुरा तपाईंलाई मन पऱ्यो?
यहोवाका साक्षीहरू सबैसँग छिटै घुलमिल हुन्छन्‌। तिनीहरूले मेरा सबै प्रश्नहरूको जवाफ बाइबलबाटै दिए। अरूलाई आफ्नो विश्वासबारे बताउन र परमेश्वरबारे सिकाउन तिनीहरूले देखाउने साहस पनि मलाई मन पऱ्यो।
तपाईं यहोवाको साक्षी हुनुभयो। के यसले तपाईंको काममा मदत पुग्यो?
धेरै मदत पुग्यो। जस्तै, चोटपटक लागेका बिरामीहरूको उपचारमा लामो समय बिताउँदा प्रायजसो डाक्टर तथा नर्सहरू मानसिक र भावनात्मक रूपमा थाक्छन्‌। अनि उदास हुन्छन्‌। तर यहोवाको साक्षी भएकोले म यस्तो खतराबाट जोगिन सकें। साथै, रोगबिमार र दुःखकष्टको * अन्त गर्ने अनि कसैले ‘म बिरामी परें’ भन्नु नपर्ने संसार ल्याउने सृष्टिकर्ताको प्रतिज्ञाबारे बिरामीहरूलाई बताउन सकें। * (g14-E 05)
^ अनु.7उपदेशक ९:५.
^ अनु.7यशैया ११:६-९.
^ अनु. 23 प्रकाश २१:३, ४.
^ अनु. 23 यशैया ३३:२४.
शेयर गर्ने शेयर गर्ने एक शल्यचिकित्सक आफ्नो विश्वासबारे बताउँछन्‌